जे जे जे ओकोचा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू नाइजेरियन फुटबल खेलाडीहरू जे जे जे ओकोचा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एल बी पूर्ण स्टोरी को एक सेवानिवृत्त फुटबल लीजेंड र जादूगर को रूप मा प्रस्तुत गर्दछ जो सर्वोत्तम उपनाम द्वारा जानिन्छ; "जे जे-जे"। हाम्रो जे-जे ओकोचा बचपन स्टोरी प्लस अनबल्ड जीवनी तथ्यहरूले तपाईंलाई बचाउको समयबाट बच्न सक्ने पूर्ण खाता ल्याउँछ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उहाँका बारेमा धेरै जना ज्ञात तथ्याङ्कहरू भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले एक पटक आफ्नो जादुई क्षमताको बारे जान्दथे तर केहि जे जे जे ओकोचाको जिज्ञासालाई धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
जे जे जे ओकोचा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
अगस्टिन अजाका "जे-जे" ओकोचा ईयुग राज्य, नाइजीरियामा 14 को 1973th दिनको जन्म भएको थियो। उनी ओबावाशी-उल्टू, डेल्टा स्टेटस, नाइजीरियाबाट प्राप्त भएका आफ्ना आमाबाबु, श्री र श्रीमती अजाका ओकोचमा जन्मिएका थिए।
जे जे-जे नाउँको वास्तवमा आफ्नो बुबा भाइ जेम्स, जुन पहिले फुटबल खेल्न थाल्नुभयो। उनको तत्काल वडा भाई, इमानुएललाई एम्मा जे-जय भनिन्छ, तर यसको सट्टा ओकोचासँगको नाम अङ्क भयो। तल जेम्स र एम्माको तस्बिर हो।
जे जे जे ओकोचा भाइहरू- जेम्स (बाँया) र एम्मा (दाँया)
जे जे जे ओकोचाले प्राय: अन्य फुटबल स्टारहरू जस्तै सवारमा फुटबल खेल्न थाले, प्राय: एक उत्साहित बल संग।
संग एक साक्षात्कार मा बीबीसी स्पोर्ट उसले भन्यो, "जहाँसम्म मलाई सम्झन सक्छ, हामी कुनै पनि गोल गर्न सकेको कुनै पनि चीजको साथ खेल्न प्रयोग गर्थ्यौं, र जब पनि हामी बल धारण गर्न सफल भए, त्यो बोनस थियो! मेरो मतलब यो अद्भुत थियो! "
1990, ओकोचा मा सामेल भयो Enugu रेंजर्स। उनको समयमा क्लब, उनले धेरै शानदार प्रदर्शन गरे जसमा एक जहाँ उनले गोल गरे र गोल गरे, एक नाइजीरिया गोलकीपरको विरुद्धमा गोल गरे। विलियम ओपारा विरुद्ध एक खेलमा BCC सिंहहरू। तल उहाँलाई नाइजीरिया सरकारको खेलकुद अधिकारी द्वारा बधाई दिइयो।
एउटै 1990 मा, ओकोचा छुट्टीमा पश्चिम जर्मनीमा गएर, जो देशले मात्र जित्यो 1990 फीफा विश्व कप, त्यसैले उनी जर्मन लीग फुटबल हेर्न सक्थे। तिनको साथी बाइनबी नुमा तेस्रो डिभिजनका लागि खेलिरहेका थिए बोरुसिया नियुनकिचिन।
एक विश्वासी बिहान, ओकोचा प्रशिक्षणमा नामा संगै थिए, जहाँ उनीहरूलाई सहभागी हुन आग्रह गरे। नेयनकिचिन कोचले ओकोचाको कौशलसँग प्रभावित पारेका थिए र अर्को दिन उनीहरूलाई सम्झौता गरेपछि उनीहरूलाई सम्झौता गरे। एक वर्ष पछि, उहाँले 1 मा सामेल गर्नुभयो। FC Saarbrücken। उनी त्यहाँ दुई ऋतुको लागि इन्ट्राचट्क फ्रैंकफर्टमा जान अघि त्यहाँ बसेका थिए जहाँ उनले ओलिभर खान (तलका विवरणहरू र भिडियोहरू) नष्ट गरे। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अहिले इतिहास हो।
जे जे जे ओकोचा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
निचीलाई जे जे जे ओकोचासँग विवाह गरिएको छ। निस्सन्देह, तिनले विवादास्पद सुन्दरताको महिलालाई विवाह गरे। उनीहरूको विवाह वर्ष 1997 मा भएको थियो जुन त्यो समय थियो जहाँ फर्नाबचे मा केहि ठूलो शोषण भइरहेको थियो।
ओकोचा र उनको सुन्दर पत्नी, निची।
निच्ची आफ्नो पति भन्दा ठूलो बाटो हो। यसले संकेत गर्छ कि प्रेमको उचाईको बारेमा छैन। पूर्व-सुपर ईगल मास्ट्रो दुई बच्चाहरु छन्, ए जे र डेनसेल ओकोचा। तल ओकोचा र तिनको परिवार हो।
ओकोचा र उनको सुन्दर परिवार
जे जे जे ओकोचा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -फ्रैंकफर्ट मेमोरीहरू
ओकोचा डिसेम्बर 1991 मा इन्ट्राचट्ट फ्रान्कफर्ट संग जुडे, जहां उनको घानायन अन्तरराष्ट्रीय स्ट्राइकर समेत धेरै प्रसिद्ध खेलाडीहरु संग जुडे टोनी यबोह र पछि थमस गुड़िया। उनले जर्मन पक्षको लागि चमक जारी राखे, एक क्रिसमसले कार्ल्सरर एससी विरुद्ध गोल गरे, खेलकुदको बराबरीमा डुबेर र गोल गरेका खेलाडी ओलिभर कानलाई दुई खेलाडीलाई पनि हराउँदै थिए।
आधिकारिक Bundesliga यूट्यूब पेज को अनुसार, उनले जर्मन फुटबल लीग को इतिहास मा सबै भन्दा राम्रो लक्ष्य बनाए। पौष्टिक जर्मन गोर्खा अझै पनि भन्छन् कि ओकोचाको लक्ष्य भनेको सबै भन्दा राम्रो लक्ष्य हो जुन तिनले स्वीकार गरे।
जे जे जे ओकोचा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पोस्ट-सेवानिवृत्ति जीवन
नाइजीरिया फुटबल किंवदन्ती एक पटक कोपको कोका कोला नाइजीरिया 2016 फाइनलमा आश्चर्य भन्दा पहिले कहिल्यै देखिएन। उनले आफ्नो उपस्थिति एक क्लीनर र कचरा कलेक्टरको रूपमा प्रकट गरे जस्तो कि उनी आफ्नो "सामान्य" कर्तव्यको बारेमा जान थाले र कुनै पनि जान्दथे कि किंवदंती उपस्थित थिए।
फाइनान्स फुटबलर्स र फाइनलमा भीड, जो लागोस, ओनिका स्टेडियममा लागोस थिए, उनीहरु अचम्म लागेका थिए र उनको साँचो पहिचानले बताएको थियो। ओकुचाले आफैंको रूपमा जितेकी थिइन्।
21 फेब्रुअरी 2015 मा, ओकोचा डेल्टा स्टेट फुटबल एसोसिएशन को अध्यक्ष को रूपमा निर्वाचित भएको थियो। अप्रिल 2015 मा, ओकोचा ले आफ्नो चासो व्यक्त गरे नाइजीरिया फुटबल संघ president; र उहाँ दृढतापूर्वक यसलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ
जे जे जे ओकोचा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -A Mentor
पीएसजी मा उनको जादू को समयमा, जय जय ओकोचा पछि नयाँ भर्ती को लागि एक गुरु थिए रोनाल्डिन्हो [हे हो, तपाईंले मलाई सुन्नुभयो!]। तपाईलाई पनि थाँहा छ, रोनाल्डिन्हो धेरै अवसरहरूमा वर्षको विश्व फुटबलर जित्न सकियो।
रोनाल्डिन्हो उनीहरूको अभिनेता जे जे जे ओकोचका लागि उनीहरूले धेरै समय पीएसजीमा सँगै आफ्नो महान प्रशंसा गरेन। रोनाल्डिन्हो एकपटक भने जे पनि जे जे ओकोचा खेलाडी र पिचमा चकित भएका बेंच देखेर अचम्म लागेका थिए।
त्यसैले यो कुनै आश्चर्य छ जब रोनाल्डिन्हो जय जय ओकोचा संग उनको Inst Instagram खाता मा एक फोटो मा मुस्कुरा रही थियो किनकी उनले यसलाई कैप्चर गरे, ... "Só camisa 10 que कहिल्यै admirei। जे जे जे ओकोचा ई @pibevalderramap। " कुन कुन कुराले अनुवाद गर्छ, "जर्सी नम्बर 10 मैले सँधै प्रशंसा गरेँ। जे जे जे ओकोचा र @pibevalderramap"। तल एक फोटो सबूत छ।
रोनाल्डिन्हो आफ्नो गुरुको प्रशंसा गर्छन्
जे जे जे ओकोचा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -बोल्टन स्टोरी
फीफा विश्व कप पछि 2002 को गर्मी मा PSG छोडेर पछि ओकोचा बोल्टन वेंडरर्स मा नि: शुल्क स्थानान्तरण मा शामिल हो। उनको पहिलो सीजन, चोटले बाधा भइरहेको भए तापनि उनलाई बोल्टनका प्रशंसकहरूसँग मनपर्ने बनाइयो, टीमको शिलालेखसँग मुद्रण शर्टहरू "जय जे जे - राम्रो लाग्यो उनीहरूले दुई पटक नाम दिए".
यो 2008 मा मतदानमा बोल्टनको सर्वोत्तम प्रिमियर लीग लक्ष्य थियो। अर्को सिजनले ओकोचाले अधिक जिम्मेवारी पाएका थिए किनभने उनी कप्तान ब्यान्डब्यान्डलाई गुग्नि बर्गेसनको सेवानिवृत्ति पछि लागेका थिए। कप्तान को रूपमा, उनले बोल्टनलाई9वर्षमा आफ्नो पहिलो कप फाइनलमा पराजित गरे जहाँ उनी एक्सएमएक्सएक्स फुटबल लीग कपमा मिडलसेब्रो एफसीमा धावक खेलाए।
2006 मा, उनी कप्तानबाट हटाइयो - उनले केहि भने कि उनले आउँदै गरेको देखे, किनकी केहि स्टाफ सदस्यहरु को रवैया मा परिवर्तन भएको थियो। यो शायद मध्य पूर्व को उनको प्रस्तावित कदम को कारण थियो, जो अनुमान मा बढ्दै गएको थियो। सिजनको अन्त्यमा, उसले सार्नको लागि एक वर्षको विस्तारलाई अस्वीकार गर्यो कतार.
2012 मा प्रीमियर लीगबाट बोल्टनको प्रतिनिधिता पछि, ओकोचाले भने कि क्लबमा उनको समय अहिले नै बर्बाद भएको थियो, किनभने क्लबले लगानी गरेन र उनीहरूको समयमा राखिएको आधारमा सुधार गरे।
जे जे जे ओकोचा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -व्यक्तित्व
जे जे जे ओकोचा उनको व्यक्तित्व को निम्नलिखित विशेषता छ।
शक्ति: ओकोचा क्रिएटिव, भावुक, न्यानो-हार्दिक, उत्साहित, हास्यपूर्ण छ
कमजोरीहरू: Stingy (उदार छैन), आक्रामक, आत्म-केन्द्रित, असीमित।
लियो मनपर्छ: प्रशंसा गरिएको, उज्ज्वल रङहरू, र साथीहरूसँग रमाईलो
मन नपराउनुहोस्: बेवास्ता गरिँदै, कठोर वास्तविकता सामना गर्दै राजाको जस्तो व्यवहार गरेन। संक्षेपमा, ओकोचा प्राकृतिक जन्मेका नेताहरू जसले कप्तानको नेतृत्वको भूमिकाको साथ प्रतिमात्मक नम्बर 10 शर्ट पहने छन्।
जे जे जे ओकोचा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
उनको ठूलो भाइ इम्मानुएल पनि नाइजीरिया टीमको लागि एक पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय थियो। ओकोचा एनिमाको सदस्य हो, ईगसमूहको जातीय व्युत्पन्नको एक समूह। उनका भनाइ अन्तरराष्ट्रिय फुटबल हो Alex Iwobi। तल जे जे ओकोचाको फोटो हो Alex Iwobi जब उहाँ अझै धेरै जवान हुनुहुन्थ्यो।
युवा एलेक्स आईबीबीको उनको चाचा जे जे ओकोचा संग
जे जे जे ओकोचा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -धर्म
जब उनी फेनबर्सामा थिए, ओकोचा टर्कीको नागरिक बने र उनको नाम Muhammet Yavuz दिइएको थियो। यो धेरै द्वारा व्याख्या गरिएको थियो कि उनको अर्थ इस्लाम मा बदल्यो। यो पछि प्रकट भएको थियो कि उहाँ अझै पनि एक मसीही हुनुहुन्छ।
जे जे जे ओकोचा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -Unfair CAF
ओकोचाले अफ्रिकी खेलाडिको उपाधि जिते पनि जितेनन्, बरु राम्रो प्रदर्शनकारी खेलाडीले 1998 मा दोस्रो पटक आउँदा पनि पुरस्कार जित्न सकेनन्।
तथापि, त्यस वर्ष बीबीसी अफ्रिका फुटबलर उद्घाटन गरे र सफल एक, पुरस्कार बनाए राख्न एकमात्र खेलाडी र एक पटक भन्दा बढी जित्न सफल भयो।
2004 मा, उनी फुटबल कथामा सूचीबद्ध थिए Peléफीफा 100 (सबै भन्दा ठूलो 125 लाइभ प्लेयरहरूको सूची)। उहाँ सूचीमा एक मात्र नाइजीरिया छ, र5अफ्रिकीहरू मध्ये एक।
2007 मा, उहाँले 12 को अन्तिम 50 वर्षको सूचीको सबैभन्दा ठूलो अफ्रिकी फुटबलमा सीएफए द्वारा आयोजित सर्वेक्षणमा तिनीहरूको 50 सालगिरहसँग मिलाएको थियो।
जे जे जे ओकोचा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -मेसी र रोनाल्डो मा उनको विचार
जय जय ओकोचाको मनपर्ने फुटबलर दुई जीवित किंवदंतियों को बीच छ लिओनेल मेस्सी। उहाँले कसरी समय र समय कसरी भन्नुभएको छ Messi प्राकृतिक छ, र त्यो सधैँ क्षेत्र मा अर्जेन्टिनाको कौशल संग भंग भएको छ। "जब मेस्सी खेल्छ, तपाईले भन्न सक्नुहुनेछ कि फुटबल खेल्दै पुर्ण प्रतिभा हो।"
तथापि, जे जे को सबै-समय मनपर्ने खेलाडी केप्पर लावरन लिमा फरेरेरा (पेपे) हो किनभने उनी मैदानको भित्र र बाहिर दुवैको उत्कृष्ट कौशल र अनुशासन देखाउँछन्।
अन्तमा, यो टिप्पणी गर्न उल्लेखनीय छ। नाइकिङ्गियनहरू हेर्ने बाटोको रूपमा ओकोचा महत्त्वपूर्ण छ Nwankwo Kanu, ब्राजिलले कसरी हेर्छन् रोबर्टो कार्लोस, जस्तो कि कसरि लाइबेरियन्स हेर्न जर्ज वेह र अन्तमा, अंग्रेजी फुटबल प्रशंसकहरू हेर्नुहोस् एन्डी कोले, एलन शेरर र माइकल ओवेन. तथ्य जाँच गर्नुहोस्: जे जे जे ओकोचा बचपन स्टोरी प्लस अनलोग जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी वा ठाँउ दिनुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस!।
भिक्टर ओसिम्हेन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
Odion Ighalo बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलेक्स आईबीबी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
केलेकी इहेनाच बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य
अहमद मोशा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
विक्टर मूड बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
मिकेल Obi बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य